Ubani u-Else ofuna i-Cool Custom-Buged Dredge - i-Ellicott Dredges
Ngubani Else Ufuna Ukuphola Okwakhiwe Ngokwangempela?
Izakhamizi zaseBarnstable County, Massachusetts zilinde ngesineke ababesanda kwenziwa Isihlakala seSand Shifter ukufika. Ukulinda kwabo sekuphelile. Uhlobo olusha sha lwe- $ 2 million dredge olwakhiwe ngu-Ellicott Dredges waseMaryland unalo ekugcineni bafika eFalmouth Harbour. Wonke umuntu ujabule ngempela ngale phrojekthi. Eqinisweni, izikhulu zamachweba zikulungele ukwambula ubuciko bazo obusha basemanzini emphakathini jikelele.
The I-Sand Shifter Ukuze Uvivinywe Kokugcina
Ithimba labamele i-Ellicott Dredges lenza izivivinyo zokuqala kuleli sonto. Ithimba lethu lisebenza ubusuku nemini ukwenza isiqiniseko sokuthi konke kuhamba ngokuhleleka ngaphambi kokudlulisela lelo dredge kubaphathi besifunda.
"Bababazekayo ukusebenza no-Ellicott," kusho uMsizi Womphathi Wesifunda uStephen Tebo, ngesikhathi ekhuluma nezintatheli ngeledlule. UTebo, uchaze imininingwane eyinkimbinkimbi yomsebenzi obandakanyekayo lapho kwakhiwa i-dredge eyakhiwe ngokwezifiso. I- I-Sand Shifter ungomunye wemikhumbi enomusa edinga ukunakwa okukhulu ngemininingwane.
Kungani I-Sand Shifter Iyadingeka Kakhulu
I-Falmouth Harbour lakhiwa e-1907,lapho kungena okusikiwe ebhishi lokuvimbela ukuhlukanisa iDamu lamanzi eDeacon lamanzi angenasawoti neNantucket Sound. IFalmouth Harbour indawo ekahle yokudoba ye-angler engajwayelekile. Kodwa-ke, ngenxa yokuthi itheku lisetshenziswa unyaka wonke, okhomishani besifunda bavote ukwakha ubumbano lwesibili lokubhangqa ne- I-Codfish. The I-Codfish, i-Ellicott Series 670 Dragon dredge endala. Kuze kube muva nje bekuwukuphela kwedredge esetshenziselwe ukugcina iFalmouth Harbour.
Ukudonswa kwesibili kuyadingeka kakhulu ngenxa yenani lomsebenzi owenzeka unyaka wonke. Kodwa-ke, amanye amaphrojekthi angabambezeleka kwesinye isikhathi abangele umsebenzi ukwenza isipele. Izinhlelo zokuqala zifaka phakathi ukusebenzisa zombili izindlela ze- I-Sand Shifter futhi I-Codfish ukugcina iFalmouth Harbour. Okwamanje, i-dredge ngayinye izobekwa ezinhlangothini zombili zetheku, Lokho kungukuthi ngaphandle kokuthi ibhizinisi lenyuke, namaphrojekthi aqale ukuhlangana,
The I-Sand Shifter izobona isenzo sayo sokuqala esikhathini esingaphansi kwamasonto amabili. Izingxoxo zigxile ekusebenziseni umkhumbi ukusiza ekuhlanzeni umfula i-Eel endaweni eseduze neCape Cod.
Isimo Sezwe Lobuchwepheshe
UStephen Bradbury, ukaputeni we I-Sand Shifter, ushayele ihlombe izici ezintsha zedredge kanye nobuchwepheshe obuphambili ngenkathi behambahamba emkhunjini nezintatheli. "Idizayini entsha ngokuphelele," esho eyiqhathanisa neyandulela yona, i-Codfish.
The I-Sand Shifter unakho kahle uphethiloli. Ngaphezu kwalokho, umkhumbi ungapompa inzika emabangeni amakhulu I-dredge ibuye ijule ijule futhi ibanzi, iwuvumele uqedele amaphrojekthi ngokushesha, kusho uBradbury.